ကျွန်ုပ်၏ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးအထုပ်နံပါတ်ကိုရှာဖွေဖော်ထုတ်ပါ | အလိုအလျောက်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး packages များခွဲခြားသတ်မှတ် | ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးကုမ္ပဏီ၏အမည်ကိုရှာဖွေဖော်ထုတ်ပါ | AI.17CKD.COM
သင်သည်တစ်ချိန်တည်းတွင်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးအထုပ် ၁၀၀ အထိကိုရှာဖွေ။ ရှာဖွေနိုင်ပြီးလိုင်းတစ်ခုစီအတွက်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးအထုပ်အရေအတွက်တစ်ခုသာဖြည့်နိုင်သည်။ စုစုပေါင်းအရေအတွက် ၁၀၀ ထက်ကျော်လွန်ပါကစနစ်သည်ပိုလျှံသောအစိတ်အပိုင်းကိုအလိုအလျောက်လျစ်လျူရှုလိမ့်မည်!
「 သင်ရှာဖွေနေသောထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးအထုပ်အရေအတွက်စုစုပေါင်းကိုခြေရာခံရန်လိုအပ်သည်။:0」
ရွေးချယ်မှုအားလုံး ခြေရာခံအချက်အလက်များရှာမတွေ့ပါ နေဆဲထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး၏လမ်းအပေါ် ... အထုပ်သည် ဦး တည်ရာသို့ရောက်လေပြီ။ အထုပ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၏အစမှတ်သို့ပြန်ရောက်ခဲ့သည်! အကောက်ခွန်များကကြားဖြတ်ထိန်းသိမ်းခံခြင်းနှင့်ကြည့်ရှုစစ်ဆေး! အခြားပုံမှန်မဟုတ်သောအခြေအနေများ!
သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးခြေရာခံခြင်းနံပါတ်စည်းမျဉ်း0ခုကိုစနစ်ကဖော်ထုတ်ခဲ့ပြီးသင်မေးမြန်းလိုသည့်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးကုမ္ပဏီ၏အမည်ကိုရွေးချယ်ပြီး “ရှာဖွေမှုစတင်ပါ” ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။
နံပါတ်စဥ် အထုပ်၏ခြေရာခံခြင်းနံပါတ် ပို့ဆောင်မှုအခြေအနေ အချက်အလက်ရင်းမြစ် နောက်ဆုံးပေါ်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးခြေရာခံသတင်းအချက်အလက်များ၏သက်ဆိုင်ရာအချိန် ထွက်ခွာချိန် စုစုပေါင်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအချိန် ဝန်ဆောင်မှုတည်နေရာ နောက်ဆုံးပေါ်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးခြေရာခံသတင်းအချက်အလက် 1 အပိုင်းအစ အသေးစိတ်ကြည့်ရှုပါ
စနစ်ကအသိအမှတ်ပြုမရထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး packages များအားလုံး:
「 ပါဝင်သည့်အကြောင်းအရာများတွင်အမှတ်စဉ်နံပါတ်ပါရှိသည် 」
「 စနစ်ဖြင့်ဖော်ထုတ်ရန်ပျက်ကွက်သောထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး packages များစုစုပေါင်းအရေအတွက်:0」
↓ ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးခြေရာခံအချက်အလက်များရှာဖွေရန်သော့ချက်စာလုံးများကိုဖြည့်ပါ ↓
「 သော့ချက်စာလုံးများနှင့်ကိုက်ညီသောထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးအထုပ်အရေအတွက်:0」
↓ သင်၏ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးအထုပ်၏ကုန်ပို့ချိန်နှောင့်နှေးအချိန်ကိုထည့်ပါ ↓
ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးအထုပ်၏ပို့ဆောင်မှုအခြေအနေကိုပြောင်းလဲသွားလိမ့်မည်။: "* သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှောင့်နှေ",
စာရင်း၏နောက်ခံအရောင်ကိုပြန်လည်ရယူရန် [နှောင့်နှေးအမှတ်အသားဖယ်ရှားပါ] ခလုပ်ကိုနှိပ်ပါ။
「 နှောင့်နှေးခဲ့ပြီးသောထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး packages များစုစုပေါင်းအရေအတွက်:0」
「 ကြိုတင်သိထားရန်လိုအပ်သည် 」: ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးအထုပ်အရေအတွက်ကိုဖြည့်ပြီးပါက [ဖော်ထုတ်ခြင်းနှင့်ထောက်လှမ်း] ခလုတ်ကိုနှိပ်ပြီးသင်မေးမြန်းလိုသည့်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးကုမ္ပဏီ၏အမည်ကိုရွေးပါ၊ ပြီးနောက် [ရှာဖွေမှုစတင်ပါ] ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။
ကျေးဇူးပြု၍ သင်၏အမှန်တကယ်လိုအပ်ချက်များနှင့်အညီသတိထားရွေးချယ်ပါ။ ရွေးချယ်စရာများအားလုံးကိုစိတ်ကြိုက်မရွေးချယ်ပါနှင့်သို့မဟုတ်လျှင်အချိန်ဖြုန်းရန်လွယ်ကူသည်။
「 သင့်ကိုကျွန်ုပ်တို့အထူးအကြံပြုလိုပါတယ် 」: အကယ်၍ သင်၏ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးအထုပ်နံပါတ်များသည်တစ်ခုတည်းသောထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးကုမ္ပဏီမှသာဖြစ်ပါကသတ်မှတ်ထားသောထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးကုမ္ပဏီ၏အထုပ်အပိုးများကိုဖော်ပြထားသောဝက်ဘ်စာမျက်နှာကိုသင်ဒီမှာသွားရန်အကြံပြုပါသည်။ - https://bt.17ckd.com/my/,
ဤနည်းလမ်းကို အသုံးပြု၍ သင်၏ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးအထုပ်ကိုရှာဖွေရန်နှင့်ရှာဖွေရန်ပိုမိုထိရောက်လိမ့်မည်။
「 ဆက်စပ်နိဒါန်း - 1 」: ကွဲပြားခြားနားသောသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအခြေအနေများသည်မတူညီသောနောက်ခံအရောင်များနှင့်ကိုက်ညီသည်။ သင်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအခြေအနေအမည်အောက်ရှိအာရပ်နံပါတ်များကိုနှိပ်သောအခါစာရင်းနောက်ခံအရောင်သည်ပြောင်းလဲလိမ့်မည်။
* ခြေရာခံအချက်အလက်များရှာမတွေ့ပါ -> အဖြူရောင်နောက်ခံအရောင်,
* နေဆဲထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး၏လမ်းအပေါ် ... -> လိမ္မော်ရောင်နောက်ခံအရောင်,
* အထုပ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၏အစမှတ်သို့ပြန်ရောက်ခဲ့သည်! -> အနီရောင်နောက်ခံအရောင်,
* အထုပ်သည် ဦး တည်ရာသို့ရောက်လေပြီ။ -> အစိမ်းရောင်နောက်ခံအရောင်,
* အကောက်ခွန်များကကြားဖြတ်ထိန်းသိမ်းခံခြင်းနှင့်ကြည့်ရှုစစ်ဆေး! -> ခရမ်းရောင်နောက်ခံအရောင်,
* အခြားပုံမှန်မဟုတ်သောအခြေအနေများ! -> အပြာ.
「 ဆက်စပ်နိဒါန်း -2」: သင်၏ ၀ န်ဆောင်မှုဆိုင်ရာအထုပ်များကိုခြေရာခံရန်ဤဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုသင်အသုံးပြုသောအခါစနစ်သည်သင်၏ကိရိယာ၏လုံခြုံရေးကိုစစ်ဆေးရန်လိုအပ်သည်။ လုံခြုံရေးစစ်ဆေးမှုကာလသည် ၆ မှ ၁၀ စက္ကန့်ခန့်ရှိသည်။
(1) အကယ်၍ system ကဤပုံကို ဆိုပါကသင်၏ခြေရာခံသည့်အပြုအမူ (သို့) စက်ပစ္စည်းအိုင်ပီသည်သံသယဖြစ်ဖွယ်ရှိသည်။ သို့မဟုတ်သင်တစ်ချိန်တည်းတွင်ဝက်ဘ်စာမျက်နှာများစွာကိုဖွင့်လှစ်ထားသောကြောင့်သင်၏စက်ပစ္စည်းသည်သင်၏စက်ပစ္စည်းအား ၀ င်ရောက်ပိတ်ဆို့ခြင်းကိုဖြစ်စေသည်။
(2) ဤပုံကိုသင်မြင်ပါက “ ” ဆိုလျှင်ဤဝက်ဘ်ဆိုက်၏ဆာဗာသည်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအောက်တွင်ရှိသည်။ ကျေးဇူးပြု၍ ၁ မိနစ်ခန့်စောင့်ဆိုင်းပြီးနောက်ဤစာမျက်နှာကိုအသစ် တင်၍ ထပ်မံကြိုးစားပါ။
「 ဆက်စပ်နိဒါန်း -3」: ခြေရာခံခြင်းရှာဖွေခြင်းပြီးဆုံးလျှင်၊ ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်ခြေရာခံအချက်အလက်များမတွေ့ရှိနိုင်သောအနည်းဆုံးထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးအထုပ်တစ်ခုရှိပါက ကျေးဇူးပြု၍ [နက်ရှိုင်းသောရှာဖွေရေး] ခလုတ်ကိုအသုံးပြုပါ၊ ၎င်းသည်သင့်ကိုကြာကြာစောင့်ရန်လိုအပ်နိုင်ပါသည်။
「 အကူအညီဖော်ပြချက် 」: သင်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးကုမ္ပဏီ၏တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုအသုံးပြုပြီးထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးခြေရာခံအချက်အလက်များရှာတွေ့နိုင်တယ်၊ ဒါပေမယ့်ဒီ ၀ ဘ်ဆိုဒ်ကိုအသုံးပြုထားသောထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များကိုသင်မတွေ့ပါကဤအခြေအနေကိုပြောပြရန်အီးမေးလ်ပို့နိုင်သည်။ - "emmis@qq.com".
အီးမေးလ်အကြောင်းအရာပုံစံ: "ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးကုမ္ပဏီ၏တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်၏အသေးစိတ် URL" + "ငါ့ကိုထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး packages များ3ခြေရာခံနံပါတ်များကိုပေးပါ (ဤရွေ့ကား3ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး packages များ "ကိုအပ်" ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး status ကိုအတွက်ဖြစ်ရပါမည်။)".
「 ဥပဒေအပေါ်မှတ်စုများ 」: ဤ ၀ က်ဘ်ဆိုက်သည်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးကုမ္ပဏီ၏တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်မဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းတွင်ပါ ၀ င်ခြင်းမရှိပါ။ ဤ ၀ က်ဘ်ဆိုက်သည်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးအစီအစဉ်များအတွက်ခြေရာခံခြင်းပလက်ဖောင်းတစ်ခုသာဖြစ်ပါသည်။ သင်၏ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးအထုပ်နှင့် ပတ်သက်၍ အခြားမေးခွန်းများရှိပါကထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးကုမ္ပဏီ၏တရားဝင်ဖုန်းကိုတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ပါ။